Fikarohana momba ny firaisana Tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray avy amin'i Robert Cunninghame Graham | Anthony Bourdain sy Gabrielle Graham | Ottavia Bourdain; Famonoan-tena sy fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Joseph Conrad ary fiainana niainan'i Anthony Bourdain
Efa mpankafy aho Antony Bourdain nandritra ny taona maro. Tiako ny endrika asehon'ireo asehony, ary koa ny fahiratan-tsainy, ny fahatsapan'ny vazivazy sy ny fahamarinan-toetra. Raha teo am-pijerena ny iray amin'ireo fandaharany aho dia nanonona ny bokin'i Joseph Conrad, Afomanga. Tamin'io fotoana io, nanam-bintana aho fa tamin'ny fiainany taloha, i Bourdain dia nanana zavatra natao tamin'i Conrad.
Tamin'ny voalohany aho na dia mety ho an'i Joseph Conrad aza izy nandritra ny fiainany taloha, fa rehefa namaky momba an'i Conrad aho dia tsapako fa ny toetrany dia mifanohitra amin'ny an'i Bourdain. Rehefa namaky aho fa nanana namana tsara antsoina i Conrad Robert Bontine Cunninghame Graham, Dia nanamarika aho fa i Graham dia tena sahala amin'i Bourdain, ao amin'ny toetrany sy ny endriny. Amin'ny fivoriana miaraka amin'ny Kevin Ryerson, fanahy Ahtun Re dia nanamafy fa Anthony Bourdain no vovoka indray vao niorina tamin'ny Robert Bontine Cunninghame Graham. Apetraho amin'ny sary ireo kofidinao mba hanitarana azy ireo.
Ny fiainan'i Robert Bontine Cunninghame Graham & Fifandraisana amin'i Anthony Bourdain
Graham dia teraka tany London, England. Taorian'ny nahavitany ny fianarany tany Eropa, dia lasa mpitsangatsangana sy mpikaroka i Graham, toa an'i Bourdain. Nandeha tany Arzantina izy, ary nahazo vola be tamin'ny asa fiompiana omby. Bourdain, rahateo, dia mpihinana karnavora tsy nidina. Nandeha tany Maraoka, Espana, Mexico ary Texas ihany koa i Graham.
Graham dia liberaly sy sosialista izay voafidy ho an'ny Parlemanta Britanika. Ny hevitr'ireo antoko politika sy sosialy dia tena malalaka. Tao amin'ny taratasy manentana indrindra manintona indrindra i Graham dia tia manodinkodina ary izy no mpikambana voalohany ao amin'ny Parlemanta higadra avy ao amin'ny Trano Commons noho ny fianianany (nampiasa ny teny hoe "maditra" izy). I Bourdain dia fantatra amin'ny fianianana amin'ny fandaharany, na dia voasivana aza ireo teny fanozonana ataony amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra.
Graham koa dia mpanoratra mpanoratra. Bourdain no mpanoratra ny fampisehoana ary mpanoratra mpanoratra izy. Graham dia naman'i Joseph Conrad ary raha ny marina, i Graham no nanampy an'i Joseph Conrad nanomboka ny asa nanombohany tamin'ny fampidirana an'i Conrad ho an'i Edgar Garnett, mpitantana ny Graham.
Ottavia Busia Bourdain amin'ny vadin'ny Reincarnation Graham, Gabrielle
Tany Mexico City dia nampianatra fefy i Graham. Toy izany koa, Boudain dia nifaninana tamin'ny haiady haiady jiu jitsu Breziliana. Ny vadiny taloha, Ottavia, dia manam-pahaizana manokana momba ny jiu-jitsu. Ny mahaliana, Ahtun Re dia nanamafy fa Ottavia dia ny fanambaràna indray ao amin'ny vovoka indray ny vadin'i Graham, Gabrielle Chideock de la Balmondiere. Misy fitoviana hita eo amin'i Gabrielle sy Ottavia.
Gaga izao tontolo izao rehefa fantatra fa namono tena i Anthony Bourdain tamin'ny 8 Jona 2018, tahaka ny nahakivy an'izao tontolo izao ny famonoan-tena nataon'i Robin Williams. Tamin'ny iray tamin'ireo seho farany nataony dia nanaiky i Bourdain fa na dia toa nanana an'izany aza izy dia tsy nahatsapa fa "tsara ny fiainana." Nanaiky ihany koa i Bourdain fa lasa namono tena izy taorian'ny nisarahany tamin'i Nancy Putkoski vadiny voalohany. Izy koa dia nanana tantaram-piainana tamin'ny fampiasana zava-mahadomelina be loatra.
Ireo dia mariky ny fahaketrahana biokimika, izay mety hahatonga ny olona hahatsapa ho ratsy be ara-pihetseham-po ka hipoitra ny faniriana hamarana ny fiainany. Ny fanafody sy ny fitsaboana ara-tsaina dia afaka mamadika ny fahatsapana toy izany ary tokony hatao ny ezaka rehetra hitadiavana fitsaboana. Any Etazonia dia afaka mahazo fanampiana amin'ny alàlan'ny:
Ny lahatsoratra iray momba ny famaranana ny fiainany manokana sy ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia natolotra niaraka tamin'ny raharaha famonoan-tena nataon'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia, nahitana lehilahy iray antsoina hoe Ruprecht Schultz. Misy rohy amin'ity tranga ity, ary koa rohy mankany amin'ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao izay misy an'i Robin Williams, eto ambany:
Trangam-panjakan'izao tontolo izao any Helmut Kohler | Ruprecht Schultz sy ny vokatry ny famonoan-tena
Trangam-panjakan'olo-tokana ny Will Rogers | Robin Williams
Misy tranga maro momba ny fanambadiana vovoka novokarin'i Ian Stevenson, MD izay misy famonoan-tena. Azo jerena amin'ny alalan'ny rohy ambany ireto:
Firaisana ara-piraisana ara-nofo amin'ny raharaha famonoan-tena
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana hita eo amin'i Robert Bontine Cunninghame Graham sy Anthony Bourdain. Misy koa ny fitoviana eo amin'i Gabrielle Graham sy Ottavia Bourdain.
Talenta sy fitondran-tena taloha: Tahaka an'i Anthony Bourdain, Graham dia mpizaha tany sy mpilalao an-tserasera, mpanoratra liberaly ary mpanoratra fanta-daza iray fantatra amin'ny fampiasana teny ozona.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Robert Bontine Cunninghame Graham dia nanambady vehivavy antsoina hoe Gabrielle, izay fantatra tamin'ny vanim-potoana ankehitriny ho vadin'i Anthony Bourdain, Ottavia.
Fiovam-pirenena: Teraka tany Angletera i Graham, fa i Anthony Bourdain kosa teraka tany New York.